ကုက္ကိုင်းဗလီ မပျက်စီးပါ ~ Myanmar Express
From : မူးဇော်
ထိုသို့ အဝေးမှ ပစ်ပေါက်မှုကြောင့် ဆိုင်းဘုတ်များ၊ မှန်အချို့ ပျက်စီး သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗလီအနီးရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကိုလည်း ရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ပြည်သူများအကြားတွင် မလိုလားအပ်သော ဆူပူအုံကြွမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်၍လည်းကောင်း လှုံ့ဆော်မှုများ ရှိလာနိုင်သဖြင့် သတိဖြင့် ဆင်ခြင်ကာ ထိန်းသိမ်းကြပါရန် သက်ဆိုင်ရာက နှိုးဆော်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ Myanmar Express Posted in: သတင်း
Burn more mosques and muslim markets and homes in Rakhine state and Myanmar.
နည်းသေး တယ် မီးရှို့ ဖို့ ပါကောင်း တယ်
17 June 2012 19:32
In RFA News (You can read in RFA website), 30 of people attacked the Mosque and broke the antique store in front of Mosque, the owners U Kyi Win and Daw Aye Aye Win said: lost K.5000000.00, inacomment said: attacked by terrorists. I don't think Muslims attacked their Mosque, so Myanmar people were the one attacked Mosque, it's mean Myanmar are terrorists. Why RFA is too much supporting Muslims, why did RFA create and make enlarge the wrong news, why RFA really want Myanmar and Muslims continue to fight?
25 January 2013 21:16
လုပ်ချင်ရင် အပြီးလုပ် မျှော့ သွေးစမ်းသလို မလုပ်ပါနဲ့ ဘာသာရေးဆိူလည်း ဘာသာရေးပေါ့ လူမျိုးရေးလည်း လူမျိုးရေး ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် လုပ်ကြပေါ့ နောက်က ဘာကိုလိုက်လုပ်ရ မှန်းကို မသိဘူးဝေလေလေ တွေလားဟ ဒါဆို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဦးနှောက်စား နေမဲ့အလူပ်ကို မလုပ်ကြပါနဲ့ ကွယ်